मेरो एच–१बी भिसाको स्थिति के होला ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७४-११-२२ बिचार / प्रतिक्रिया
यस विश्वसन्देश पत्रिकामार्फत कानूनी प्रश्नहरुको सहज र सरल भाषामा सेवा पु¥याइरहनुभएकोमा कानून व्यवसायी रमेश श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । म नेपालमा रहँदा नै एक अमेरिकी कम्पनीबाट स्पोन्सर पाई मेरो एच–१बी भिसा स्वीकृत भयो । त्यसै समयमा मेरो विवाह पनि भयो । मैले एच–१बी भिसा प्राप्त गरेपछि मेरी श्रीमतीले पनि एच–४ डिपेन्डेन्ट भिसाका लागि युएस एम्बेस्सीमा अन्तरवार्ताका लागि गइन् । अन्तरवार्तामा कुरा फेरेको भनी मेरी श्रमितीलाई भिसा दिइएन । त्यसपश्चात् युएस एम्बेस्सीले मलाई पुनः अन्तरवार्ताका लागि बोलायो । अन्तरवार्ता लिने कन्सुलेटले मेरो विवाह सही नभएको र मैले विदेशीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न मद्दत गरेको भनेर आरोप लगायो । मैले त्यसको प्रतिवाद गरें । तर, उनीहरुले मेरो कुरा सुनेनन् र भन्यो– ‘तपाईंको भिसा पेटिसनलाई रद्द गर्ने सुझावसहित अमेरिकामा फर्काइनेछ, तपाईंले युएससीआईएससँग नै आफ्नो कुराहरु पेश गर्नुहोला भन्यो ।’ मैले धेरैचोटि युएस कन्सुलेट अफिसमा गएर कुरा गर्न कोसिस गरें, तर उनीहरुले कुरा गर्न चाहेनन् । साह्रै दुविधा र असहाय महसुस गरेको छु । यस्तो अवस्थामा मैले के गर्न सक्छु होला ? र मेरो एच–१बी भिसाको स्थिति के होला ? के म मेरो भिसाको आधारमा अमेरिका प्रवेश गर्न सक्छु होला ? सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।
– प्रकाश केसी, काठमाडौं
अमेरिकी कम्पनी वा इम्प्लोयरहरुले प्रायः अकुपेशनका लागि विदेशी कामदारहरु, जो त्यस्ता अकुपेशनहरुमा योग्य हुन्छन्, उनीहरुलाई ३ वर्षदेखि ६ वर्षसम्मका लागि एच–१बी भिसाका लागि पेटिसन गरी अमेरिकामा अस्थायी कामदारका रुपमा ल्याउने व्यवस्था अमेरिकी अध्यागमनले व्यवस्था गरेको छ । तर, तपाईंको समस्या एच–१बी पेटिसनसँग भन्दा पनि भिन्नरुपमा प्स्तुत भएको छ । तपाईंको एच–१बी भिसा पेटिसन स्वीकृत भएर तपाईंको लागि युएस कन्सुलेटले भिसा प्रदान गरेपछि विवाह गर्नुभएकोले कन्सुलेट अफिसलाई शंका–उपशंका उत्पन्न भएको हुन सक्छ । तपाईंको श्रीमतीको अन्तरवार्तामा उहाँले सही तरिकाले जबाफ दिन नसकेका कारण तपाईंहरुबीचको वैवाहिक सम्बन्ध सही र सत्य नभएको भन्ने निष्कर्षमा कन्सुलेट अफिसर पुगेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा युएस कन्सुलेटले यो निष्कर्ष निकाल्यो कि तपार्इंले त्यस महिलालाई अमेरिकामा गैरकानूनी तरिकाले प्रवेश गर्न मद्दत पु¥याउने प्रयास गर्नुभयो । यस निष्कर्षको परिणाम दुई वटा हुन सक्छ ः (१) तपाईंले युएस कन्सुलेटलाई झूटो बोल्नुभयो, (२) त्यसरी झुटो बोलेर अवैध तरिकाले विदेशीलाई अमेरिका प्रवेश गराउन खोज्नुभयो । अर्थात् एलियन स्मगलिङ गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।
यी आरोपहरु धेरै संगीन हुन्छन् । त्यसको असरको कुरा गर्दा तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको एच–१बी भिसा रद्द हुने मात्र नभएर तपाईंलाई भविष्यमा कुनै पनि किसिमको अध्यागमन सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिनेछ । त्यसैले यदि तपाईंको विवाह सही र सत्य हो भने युएससीआईएसमा त्यस आरोपको प्रतिकार गर्ने सुझाव छ । प्रक्रियाको प्रसंगमा अब तपाईंको पेटिसन युएससीआईएसको सम्बन्धित सर्भिस सेन्टरमा फिर्ता आउनेछ । त्यसपश्चात् युएससीआईएसले तपाईंको पेटिसनलाई रद्द गर्नका लागि सम्पूर्ण कारण खुलाई ‘इन्टेन्ट टु रिभोक’ भन्ने पत्र पठाउनेछ । सो पत्र पाएपछि ३० दिनभित्र तपाईंले त्यसमा उल्लेख भएका कारणहरुलाई रिबुट गर्ने जबाफ युएससीआईएसमा पेश गर्नुपर्नेछ । यदि युएससीआईएसले तपाईंको जबाफमा चित्त बुझाएमा सो पेटिसनलाई पुनः स्वीकृत गरी युएस कन्सुलेट नेपालमा फर्काउनेछ । यदि तपाईंको कुरामा चित्त बुझे, उक्त पेटिसन रद्द गर्नेछ ।
अब के तपाईंको एच–१बी भिसा लिएर अमेरिका प्रवेश गर्न सक्छु भन्ने प्रश्नको जबाफमा मेरो सुझाव यो कि अमेरिकातर्फ यात्रा गर्नु उचित नहोला । कारण तपाईंको एच–१बी भिसालाई रिभोकेसनको प्रोसेसमा गइसकेपछि एयरपोर्ट वा पोर्ट अफ इन्ट्रीका इमिग्रेसन अफिसरले सो भिसाको आधारमा तपाईंलाई प्रवेश गर्न दिने स्थिति धेरै नै कम हुन्छ । युएस कन्सुलेटले तपार्इंको भिसाविरुद्ध नकारात्मक निर्ण लिएर युएसको कस्टम एण्ड बोर्डर पेट्रोल (सीबीपी)लाई त्यसको सूचना नगरीकन बसेको होला भनेर कल्पना गर्न त्यो एक दिवास सपना मात्र हो । त्यसैले सो भिसा लिएर अमेरिका प्रवेश गर्ने कोसिस गर्न त्यति उचित नहोला ।